Ngokukrakra ... Kutheni Nawe? | Martech Zone
Ngokukrakra… Kutheni Nawe?
NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 NgeCawa, ngo-Novemba 20, 2011 Douglas Karr
Sisebenza nabathengi abaninzi abanobunkunkqele kangangokuba umsebenzi wethu awuntsonkothanga… ngenene uzama nje ukugxila kubathengi bethu, ukubeka phambili umsebenzi wabo, nokwenza izicwangciso eziphuhlisiweyo.
Kutheni le nto ulahla imali eninzi kwimikhankaso yexesha elifutshane endaweni yokutyala imali kwizicwangciso zexesha elide?
Kutheni le nto ulindele ukuthengisa ngakumbi xa ungakhange ulongeze utyalomali lwakho?
Kutheni usabagcina abathengisi kwimirholo xa bengavali izikhokelo ezifanelekileyo?
Kutheni le nto usenza isisombululo sangaphakathi xa ungaya kuthenga ngexabiso eliphantsi, ngokukhawuleza nangcono?
Kutheni uzama ukuphuhlisa amanqaku ngakumbi xa uphulukana nabathengi ngaphezulu kwezo zingasebenzi?
Kutheni le nto uthenga ezona zinexabiso eliphantsi, usazi ukuba uphawu lwakho alubizi?
Kutheni usahlawula umntu ohlaziya indawo yakho xa iinkqubo zolawulo lomxholo zifikeleleka?
Kutheni usenza ishishini kunye ne-arhente efanayo engenakho ukubonisa i-ROI yabo?
Kutheni le nto utyala imali kwiphulo elitsha ngelixa ungakhange uvumele eyokugqibela ukuba igqibe?
Kutheni uvuza abathengi abatsha kwaye hayi abo bebekude nawe ixesha elide?
Kutheni uhlawula umvuzo ngokucofa xa ungacoci amagama aphambili okanye uvavanye iinguqulelo ezahlukeneyo zentengiso zakho okanye iphepha lokufika?
Kutheni le nto uthenga iwebhusayithi entsha engabandakanyi iselfowuni, ukukhangela kunye neendlela zokuguqula?
Kutheni uhlawula ukukhuthaza indawo yakho xa ingakhange ilungiselelwe ukukhangela?
Kutheni le nto uthenga indawo entsha ngelixa ungakhange uthathe ithuba lokugqibela?
Kutheni usenza intengiso kwezinye iisayithi xa ungenayo iividiyo ngokwakho?
Kutheni uzama ukubeka inqanaba kumagama aphambili ongasokuze ulawule kuwo kwaye ungazihoyi ezomsila mde onokuzenza?
Kutheni ukhetha amagama aphambili aqhuba amawaka eendwendwe xa ufuna konke okumbalwa?
Kutheni uzama ukubeka inqanaba kuzwelonke xa awunabuchule ekuhlaleni?
Kutheni le nto uzama ukubeka kwinqanaba elingcono kumagama aphambili angazukuguqula ukuthengisa?
Kutheni ujonga nje kubahlalutyi veki nganye xa ungakhange usete imicimbi, iinjongo, ukulandela umkhondo, ukudityaniswa kwe-ecommerce okanye iifanele zokuthengisa?
Kutheni le nto ufuna ukuntywila kwimithombo yeendaba usazi ukuba awukuthandi ukuba sentlalweni?
Kutheni le nto uthengisa ku-Twitter xa indawo yakho ingaguquki iindwendwe?
Kutheni ujonge ababhalisile abatsha ngelixa uninzi lwakho lurhuma kwi-imeyile yakho?
Kutheni uthumela ikratshi lakho ngeveki imeyile endaweni yokuthumela into engakholelekiyo ngenyanga i-imeyile eqhuba iziphumo ezizezona?
Kutheni le nto uthengisa kuFacebook xa ungenayo inkqubo yokukhulisa nge-imeyile?
Kutheni ubhloga kwindawo ekungeyoyakho… usenza ixabiso kunye negunya kwinto ongasokuze uzuze kuyo?
Kutheni le nto ubhloga kwaye ungawukhuthazi umxholo ochithe ixesha elininzi ubhala?
Kutheni usebenza ngokuqhubeka kwakhona? Ngaba imisebenzi emikhulu ayizange iphinde ihambise kwakhona?
Kutheni le nto uza kusebenza yonke imihla usoyika into oyenzayo endaweni yokuyeka nokwenza into oyithandayo?
Kutheni ukwiTwitter nakuFacebook ungakhangeli kubhloga?
Kutheni uqala inkqubo ye-imeyile xa indawo yakho ingasebenzi?
Kutheni ukhathazekile malunga nenqanaba lokuhlawula xa ungenayo into kwindawo yakho yokugcina abantu bezibandakanya?
Kutheni ubhala umxholo ongaphezulu xa ungenayo neefoto yakho kwindawo yakho ukuze abantu bazi ukuba ungubani?
Kutheni ubhala umxholo omkhulu kwaye uwubonisa kwindawo oyithiyileyo?
Kutheni uchitha ixesha ucinga malunga into enkulu elandelayo endaweni yokwenza kakuhle izinto osele unazo?
Kutheni uzama ukuzenza ngokwakho endaweni yokufumana uncedo?
Ndihlala ndihlekisa ngabantu ukuba ndingumcebisi kwimidiya yoluntu kodwa kunqabile ukuba ndibonane nabantu malunga nemidiya yoluntu. Kuyinyani, nangona kunjalo. Namhlanje omnye wabathengi bethu usandula ukuqala iphepha le-Facebook kwinkampani yabo… Kwiinyanga ezi-6 emva koko saqala ukusebenza nabo. Ibiya kuba kukungakhathali kum ukubenza batyibilike kwisicwangciso-qhinga semidiya yoluntu kuba bengakhange bawukhuphe wonke umsebenzi ababesele bewenza.
Wonke umntu usoloko enyanzela abathengisi ukuba benze into entsha, eyahlukileyo, enomdla, njl. Kodwa ngaphandle kwesiseko esihle ukwakha phezu kwayo, konke oko kukuchitha ixesha nemali. Yintoni le usebenza kuyo ongafanelanga ukuba yiyo?
Umthengi ngokuchasene nokuziphatha kweShishini kwimithombo yeendaba
Oktobha 5, 2011 ngo-6: 41 PM
UDoug, iposti enkulu. Ndifuna ukwazi ukuba usebenzisa ntoni ukwenza oku kufakwa kwikopi kwaye uncamathisele iibhloko zakho:
Ie Khuphela / uncamathisele “Yintoni le usebenza kuyo ongafanelanga ukuba yiyo?”
-> Funda ngakumbi: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh ”
Oktobha 5, 2011 ngo-6: 46 PM
Ngokwenyani ilandelela ukuba bangaphi abantu abenza ikopi kwaye, ukuba basebenzisa ikhonkco elinikiweyo, kukwazisa ukuba babuyele kwindawo yakho ngombhalo okhutshelweyo! Izinto ezintle!